Kulanka RW Rooble & xubno kamid ah hormuudka Warbaahinta! Baratanka Siyaasadda & Saxaafadda – Banaadir Times
By banaadir 20th November 2020 121 No comment
Todobo qof oo kamid ah hormuudka Warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa kaqaybgashay kulanka RW Rooble iyo madaxda xarumaha Warbaahinta, xafiisyada kulamada gaarka ah ee dhismaha XRW midkood ayuu kadhacay Shirku, laba xubnood oo kamid ah kooxda xiriirka iyo Warbaahinta oo fududeyneysay kulanka ayaa nala socday, Ra’isalwasaare Rooble oo buug iyo Qalin gacanta ku haysta iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa sii fadhiyey Hoolka! aad ayuu u degganaa una diyaarsanaa muuqaal ahaan.
Salaan iyo isbarasho kaddib waxa aan u sheegnay arrimaha waawyen ee ku taagan Warbaahinta oo qaybya-tirka xeerka Warbaahintu ugu horreeyo, qaarkeen oo malaha u duur-xulayey waxa ay kusoo qaadeen muranka ka taagan siyaasadda iyo doorashooyinka madaxtooyada iyo Baarlamaanka! si degen ayuus u dhegeystay! waxa uu u ekaa Siyaasi isu sii diyaariyey in uu farriimihiisa ku gudbiyo dhowr daqiiqo! hayeeshee kulankan waxa ugu xigay kulanka golaha Wasiirada, kahorna waxa uu kayimid kulanka guddiga doorashooyinka dadban, sidaas awgeed waxa uu kujiray degdeg aan saamixi Karin in lagala hadlo dhammaan waxa loo baahan yahay.
Arrinta guddiga maamulaya doorashada Somaliland ayuu kahadlay